Mitsubishi Android Car GPS, Mitsubishi Android 4.2 Car Dvd, Mitsubishi gam akporo 5.1 Car Dvd na-emepụta
Nkọwa:Mitsubishi Android Car Dvd,Mitsubishi Android 4.2 Car Dvd,Mitsubishi Android 5.1 Car Dvd,Mitsubishi Android Car Dvd,,
Home > Ngwaahịa > Mitsubishi Android Car Dvd
Ngwaahịa nke Mitsubishi Android Car Dvd , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Mitsubishi Android Car Dvd , Mitsubishi Android 4.2 Car Dvd suppliers / factory, wholesale high-quality products of Mitsubishi Android 5.1 Car Dvd R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Sistemụ igwe eji arụ ọrụ gam akporo Android 9.0 maka Outlander 2014  Kpọtụrụ ugbu a
sistemụ mkpuchi ụgbọ ala maka ASX 2010-2012  Kpọtụrụ ugbu a
Ndị isi oche nke Android maka Outlander 2006-2012  Kpọtụrụ ugbu a
Android Car Radio maka Lancer 2012  Kpọtụrụ ugbu a
ụgbọ ala abụọ dvd ọkpụkpọ maka Outlander 2014  Kpọtụrụ ugbu a
Klyde Android bilstereo ịnyagharịa maka ASX 2010-2012  Kpọtụrụ ugbu a
Klyde Android Multimedia bilstereo maka LANCER 2015  Kpọtụrụ ugbu a
AUTORADIO GPS MULTIMEDIA maka PAJERO 2006-2012  Kpọtụrụ ugbu a
Android Bilstereo multimedia navigation maka ASX 2010-2012  Kpọtụrụ ugbu a
Android bilstereo ịnyagharịa maka Lancer 2006-2012  Kpọtụrụ ugbu a
Multimedia blọọgụ Android maka Lancer 2014-2015  Kpọtụrụ ugbu a
Multimedia Bilstereo maka Outlander 2006-2012  Kpọtụrụ ugbu a
igwe egwu dvd igwe egwu maka Outlander 2014 deckless  Kpọtụrụ ugbu a
usoro igwọ ụgbọ ala na ntụrụndụ maka Outlander 2014  Kpọtụrụ ugbu a
ntụrụndụ ụgbọ ala maka LANCER 2015  Kpọtụrụ ugbu a
Octa Core 32G Head Unit Lancer 2015  Kpọtụrụ ugbu a
redio ụgbọ ala nwere gps maka ASX 2010-2012  Kpọtụrụ ugbu a
stereo ụgbọ ala na igodo LANCER 2015  Kpọtụrụ ugbu a
Egwuregwu Carult Multimedia Player nke 2012 ASX  Kpọtụrụ ugbu a
Igwe ụgbọ ala gam akporo maka ASX 2010-2012  Kpọtụrụ ugbu a
Mitsubishi Outlander Android Car DVD Player  Kpọtụrụ ugbu a
Sistemụ igwe eji arụ ọrụ gam akporo Android 9.0 maka Outlander 2014
Sistemụ igwe eji arụ ọrụ gam akporo Android 9.0 maka Outlander 2014 1.Perfect Fit maka ụgbọ ala gị: Ezubere igwe a ka ọ daba na ịrụ ọrụ nke ọma na ụgbọ ala gị. Ihe ọ bụla sitere na njiri na anya a na-adaba ka ọ dị mma kachasị mma. Ezie na ngwaike...
sistemụ mkpuchi ụgbọ ala maka ASX 2010-2012
sistemụ mkpuchi ụgbọ ala maka ASX 2010-2012 Sistemụ igwe elekere igwe eletriki a maka ASX nwere sistemụ arụmọrụ gam akporo 9.0, ebe nchekwa 4 + 32G, Octa-core CPU, RDS redio nwere ahaziri elu. 4 * 50w akwa ike amplifiers na muti-idozi nke EQ maka ọ...
Ndị isi oche nke Android maka Outlander 2006-2012
Ndị isi oche nke Android maka Outlander 2006-2012 Ngalaba gam akporo Isi nke maka Outlander nwere sistemụ arụmọrụ gam akporo 9.0, ebe nchekwa 4 + 32G, Octa-core CPU, RDS nke nwere ahaziri elu. 4 * 50w akwa ike amplifiers na muti-idozi nke EQ maka ọ...
Android Car Radio maka Lancer 2012
Android Car Radio maka Lancer 2012 Ngalaba gam akporo Car Radio nke Lancer nwere igwe eji arụ ọrụ Android 9.0 kachasị ọhụrụ, ebe nchekwa 4 + 32G, Octa-core CPU, RDS nke nwere ahaziri elu. 4 * 50w akwa ike amplifiers na muti-idozi nke EQ maka ọ...
ụgbọ ala abụọ dvd ọkpụkpọ maka Outlander 2014
ụgbọ ala abụọ dvd ọkpụkpọ maka Outlander 2014 Kedu ihe anyị nwere na ọnụọgụ abụọ maka Outlander 2014? 1. Site na ngwa a okpueze okpukpu abụọ maka Outlander 2014, ị nwere ike ịnụ ụtọ njikọ internetntanetị site na BT. Na mbido, jikọtara ekwentị iPhone...
Klyde Android bilstereo ịnyagharịa maka ASX 2010-2012
Klyde Android bilstereo ịnyagharịa maka ASX 2010-2012 Dị ka otu n'ime ndị na-eweta Android Car DVD emeputa na China, Klyde nwere ezigbo aha n'ọtụtụ mba, dị ka Russia, Turkey, GCC mba wdg. Lee anyị na-akwado ahịa anyị dị egwu gam akporo...
Klyde Android Multimedia bilstereo maka LANCER 2015
Klyde Android Multimedia bilstereo maka LANCER 2015 Dị ka otu n'ime ndị na-eweta Android Car DVD emeputa na China, Klyde nwere ezigbo aha n'ọtụtụ mba, dị ka Russia, Turkey, GCC mba wdg. Lee anyị na-akwado ahịa anyị dị egwu gam akporo...
AUTORADIO GPS MULTIMEDIA maka PAJERO 2006-2012
Android 8.0 PX5 AUTORADIO GPS MULTIMEDIA maka PAJERO 2006-2012 Kacha ọhụrụ gam akporo 8.0 OS na-eme ka ojiji ebe nchekwa dịkwuo mma n’elu ikpo okwu iji hụ na ngwa nwere ike ịgba ọsọ nke ọma na ngwaọrụ nwere 4GB Ram. Ugbu a ị nwere ike ịnụ ụtọ...
Android Bilstereo multimedia navigation maka ASX 2010-2012
Android 8.0 PX5 Android Bilstereo multimedia navigation maka ASX 2010-2012 Gam akporo 8.0 Oreo, CPU: Octa-Core, 4GB Ram & 32GB ROM, Redio redio IC dị elu: NXP TEF6686, na ịnabata ezigbo redio. Akụkụ Isi 1) sistemụ Oreo ọhụrụ nke 8.0 Oreo,...
Android bilstereo ịnyagharịa maka Lancer 2006-2012
Android 8.0 PX5 Ududo bilstereo maka Lancer 2006-2012 Kacha ọhụrụ gam akporo 8.0 OS na-eme ka ojiji ebe nchekwa dịkwuo mma n’elu ikpo okwu iji hụ na ngwa nwere ike ịgba ọsọ nke ọma na ngwaọrụ nwere 4GB Ram. Ugbu a ị nwere ike ịnụ ụtọ mmeghachi omume...
Multimedia blọọgụ Android maka Lancer 2014-2015
Android 8.0 PX5 Android Multimedia bilstereo maka Lancer 2014-2015 Gam akporo 8.0 Oreo, CPU: Octa-Core, 4GB Ram & 32GB ROM, Redio redio IC dị elu: NXP TEF6686, na ịnabata ezigbo redio. Akụkụ Isi 1) sistemụ Oreo ọhụrụ nke 8.0 Oreo, Rockchip nke...
Multimedia Bilstereo maka Outlander 2006-2012
Android 8.0 PX5 Bilstereo Multimedia maka Outlander 2006-2012 1. Kacha ọhụrụ gam akporo 8.0 OS na-eme ka ojiji ebe nchekwa dịkwuo mma n'ofe ikpo okwu iji hụ na ngwa nwere ike ịgba ọsọ nke ọma na ngwaọrụ nwere 4GB Ram. Ugbu a ị nwere ike ịnụ ụtọ...
igwe egwu dvd igwe egwu maka Outlander 2014 deckless
Gam akporo 8.0 PX5 ọkpụkpọ dvd na-ewu ewu maka Outlander 2014 deckless 1. ihe a nwere ike na DTV Box ejikọtara. sistemụ DAB + wuru, dị na-ejikọ na DAB + Igbe anyị iji rụọ ọrụ a. Sistemụ DVR arụnyere, naanị jiri eriri Igwe USB jikọọ iji rụọ ọrụ ndekọ...
usoro igwọ ụgbọ ala na ntụrụndụ maka Outlander 2014
Gam akporo 8.0 PX5 KLD ụgbọ ala usoro na ntụrụndụ maka Outlander 2014 1. Kacha ọhụrụ gam akporo 8.0 OS na-eme ka ojiji ebe nchekwa dịkwuo mma n'ofe ikpo okwu iji hụ na ngwa nwere ike ịgba ọsọ nke ọma na ngwaọrụ nwere 4GB Ram. Ugbu a ị nwere ike...
ntụrụndụ ụgbọ ala maka LANCER 2015
Android 8.0 ụgbọ ala dvd maka gam akporo ụgbọ ala dvd maka Mitsubishi LANCER 2015 1 ) gam akporo 8.0 Oreo, RAM: 4GB, ROM: 32GB, CPU: Octa-core Processor 1.5GHz, redio dị elu IC: NXP TEF6686, na ịnabata ọfụma. 2 ) TDA7851 nkwupụta nrụpụta IC,...
Octa Core 32G Head Unit Lancer 2015 1, Naviggagharị 3D: Sitena ụgbọ ala nwere ọrụ igodo ọgbara ụwa zuru oke nke eziokwu zuru oke. Site na ọnọdụ dị ugbu a, ọsọ, ihe dịpụrụ adịpụ, ihe ngosipụta ala ụlọ, ngosi 3D n'okporo ụzọ, nchọta ebe na...
redio ụgbọ ala nwere gps maka ASX 2010-2012
Redio ụgbọ ala PX5 na gps maka ASX 2010-2012 10.1 anụ ọhịa, Octa-Core Processor & 4GB Ram gam akporo 8.0 ana achi achi ngwa ososo na ahuhu di ocha. Ìhè Top Ogo Octa-Core 1.6Ghz CPU, 4G Ram na ihe ịtụnanya wuru na 32GB Flash; Android 8.0 OS nwere...
stereo ụgbọ ala na igodo LANCER 2015
PX5 stereo ụgbọ ala nke igodo LANCER 2015 10.1 anụ ọhịa, Octa-Core Processor & 4GB Ram gam akporo 8.0 ana achi achi ngwa ososo na ahuhu di ocha. Ìhè Top Ogo Octa-Core 1.6Ghz CPU, 4G Ram na ihe ịtụnanya wuru na 32GB Flash; Android 8.0 OS nwere...
Egwuregwu Carult Multimedia Player nke 2012 ASX
Egwuregwu Carult Multimedia Player nke 2012 ASX 1, Naviggagharị 3D: Sitena ụgbọ ala nwere ọrụ igodo ọgbara ụwa zuru oke nke eziokwu zuru oke. Dị Mkpa Egwuregwu Multimedia Player nke 2012 ASX Site na ọnọdụ dị ugbu a, ọsọ, ihe dịpụrụ adịpụ, ngosipụta...
Igwe ụgbọ ala gam akporo maka ASX 2010-2012
Android 8.0 ụgbọ ala dvd maka Mitsubishi ASX 2010-2012 Kacha ọhụrụ gam akporo 8.0.0 OS. 1024 * 600 HD Capacitive Touch Screen, Nkwado Digital TV, arụ ọrụ mmetụ. Kwado USB Record DVD Camera DVD. Nkwado Mirror-njikọ, njikọ dị mfe na iPhones na ekwentị...
Mitsubishi Outlander Android Car DVD Player 1.Mitsubishi Outlander Android Car DVD Player tinyere gam akporo na wince Car DVD Player, nwere ahụmịhe afọ 7 na imebe, n'ichepụta na ire ahịa Car DVD player, anyị emeela mmekọrịta azụmahịa na ọtụtụ...
China Mitsubishi Android Car Dvd Ngwa
1.Mitsubishi Android Car Dvd, usoro a nwere ọtụtụ ụdị, nwere ike dabara ụgbọ ala Mitsubishi dị iche iche. Mitsubishi Android Car Dvd ( multimedia Car Dvd ), dgbọ ala dvd gps maka nke a dị elu, anyị na-enye akwụkwọ ikike ọnwa iri na abụọ, cpu bụ Octa core Rockchip PX5 Cortex A9, ọ dị ike ma kwụsie ike karị.
2.Mitsubishi Android Car Dvd, Kwado atụmatụ ejikọtara dị mfe: Dakọtara na ekwentị ndị android na ngwaọrụ, njirimara dị mfe na-eme ka njikwa ọnụ dị n'etiti ama ama gị na isi ụgbọ ala gị. Nwere ike ijikọ ma mekọrịta smartphone gị na uni site na USB, na-enweghị sọftụwia ọzọ a chọrọ.
3.Mitsubishi gam akporo Car Dvd dabara maka outlander 2015 / Outlander 2014 / Outlander 2006-2012 / Lancer 2014-2015 / Lancer 2006-2012 / ASX 2010-2012 / PAJERO 2006-2012 -Adị ugbu a, anyị ga-etolite na ndị ọzọ ụdị .